စိတ်နှလုံးမှ ပြောသောစကားများ (အပိုင်း – ၁၄) ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက် | ESD | Burmese
စိတ်နှလုံးမှ ပြောသောစကားများ (အပိုင်း – ၁၄) ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်
ချစ်လှစွာသော နိုင်ငံသား အပေါင်းတို့…. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ….
ဒီကနေ့ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့ဟာ Kargil စစ်ပွဲရဲ့ အောင်ပွဲနေ့ဖြစ်တဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ် ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၁ နှစ်အကြာက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တပ်မတော်ဟာ Kargil စစ်ပွဲကြီးမှာ အောင်လံတော်ကို ဒီနေ့ဒီရက်မှာ လွှင့်ထူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ Kargil စစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ချိန်က အခြေအနေတွေကို ဘယ်တော့မှ မေ့လျော့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဟာ သူ့နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေကနေ အာရုံလွှဲပြောင်းဖို့အတွက် အိန္ဒိယနယ်မြေအပေါ် ထိပါးကျူးကျော်ပြီး အဲဒီဖြစ်ရပ်ကို စတင်မီးမွေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနှင့် ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေး ထွန်းကားရေးကြိုးပမ်းချက်တွေမှာ လုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။
မလိုမုန်းထားစိတ် ရှိသူတွေဟာ သူတို့အပေါ်မေတ္တာထားသူတွေဖြစ်လင့်ကစား ထိခိုက်နာကျင်စေဖို့ အမြဲကြံဆနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံက ကူညီဖေးမမယ့်လက် ကမ်းလှမ်းချိန်မှာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဟာ နောက်ကျောကို ဓါးနဲ့ထိုးဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ရဲရင့်လှတဲ့ တပ်မတော်က အစွမ်းသတ္တိတွေပြသပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ခွန်အားကို ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ချိန်မှာတော့ တကမ္ဘာလုံးက စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။ ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ တောင်တန်းထိပ်တွေဟာ ရန်သူတွေ ရှိနေကြပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တပ်မတော်နှင့် ရဲရင့်လှတဲ့တပ်သားတွေက တောင်အောက်ခြေကနေ တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတာကို တွေးမြင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ တောင်ကုန်းတွေကို သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ အောင်မြင်မှုသက်သက် မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး…..
ဒါဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တပ်မတော်သားတွေရဲ့ ရဲရင့်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓါတ်ရဲ့ အောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့်အနေနှင့် အဲဒီ Kargil ဒေသကို သွားရောက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းရရှိခဲ့တာကိုလည်း အလွန်ဝမ်းမြောက်မိပြီး နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား သူရသတ္တနှင့်ပြည့်ဝတဲ့ တပ်သားတွေနှင့် အာဇာနည် သူရဲကောင်းတွေကို ကျနော် ဒီကနေ့ ရိုသေ ဂါရဝ ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အမိနိုင်ငံတော်ရဲ့ တကယ့်သူရဲကောင်းတွေ မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ သတ္တိရှင် မိခင်တွေကိုလည်း ကျနော် အလေးပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကျနော်ဟာ www.gallantryawards.gov.in ဝဘ်ဆိုဒ်ကို သွားရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့ သင်တို့ကို ပြောကြားလိုပါတယ်။
Kargil စစ်ပွဲကာလအတွင်းမှာ ခံတပ်နီပေါ်ကနေ Atal ji ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေဟာ ဒီကနေ့အထိ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက Atal ji ဟာ မဟတ္တမ ဂန္ဒီကြီးရဲ့ အဆုံးအမနှင့် သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လူတဦးဟာ ဘာလုပ်ရမယ် ဒါမှမဟုတ် ဘာမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ဖို့ ဘေးကျပ်နံကျပ် ဖြစ်နေပြီဆိုရင် အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အဆင်းရဲ့ဆုံးနှင့် ဖေးမမှုအမဲ့ဆုံးသူတွေအကြောင်း တွေးကြည့်ရမယ် ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစုံတဦးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ သူရည်ရွယ်တဲ့သူအတွက် အကျိုးရှိမယ် မရှိဘူးဆိုတဲ့ ရလဒ်ထွက်ပေါ်မှုကို ခြင့်ချိန်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တစုံတရာ မချမှတ်မီ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မိမိတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ခြေလှမ်းတွေနှင့် ကြိုးပမ်းချက်တွေက အဲဒီအလှမ်းဝေးလှတဲ့ တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ အသက်ပေးဆပ်ခဲ့ကြတဲ့ တပ်သားတွေရဲ့ ဂုဏ်သရေနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါ့မလားဆိုတာကို တွေးတောရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားဆောင်ပုဒ်ကို Atal ji က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ချစ်လှစွာသော နိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ ခင်ဗျာ….
လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်အကြာက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုအပေါ် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ တိုက်ဖျက်ခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့နည်းလမ်းဟာ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှု အများအပြားတို့ မှားယွင်းကြတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်း ကိုရိုနာရောဂါ ပြန်လည်ကျန်းမာလာမှုနှုန်းဟ တခြားနိုင်ငံတွေထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး သေဆုံးမှုနှုန်းကလည်း အလွန်နည်းပါးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုရိုနာ ရောဂါအန္တရာယ်ဟာ ကျော်လွှားနိုင်မှုအဆင့်နောက်မှာ ရှိနေပြီး နေရာအများအပြားတို့မှာ အလျင်အမြန် ပျံ့နှံ့နေဆဲဖြစ်တာကြောင့် ပိုပြီး သတိရှိသွားကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဒီကပ်ဘေးကြီးကို သတိ၊ ဝီရိယရှိရှိနှင့် ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကပ်ဘေးကာလအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံရဲ့ ကျေးလက်ဒေသတွေဟာ တနိုင်ငံလုံးအတွက် မီးမောင်းထိုး လမ်းညွှန်မှုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ကျေးရွာတွေနှင့် ပန်ချာယတ် ဒေသတွေမှာ နေထိုင်ကြသူတွေနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထိရောက်မှုရှိတဲ့ ဥပမာ အများအပြားတို့ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
Jammu ဒေသအတွင်းက ကျေးရွာတရွာမှာ Balbir Kaur Ji ဆိုသူအမျိုးသမီးဟာ ကုတင် ၃၀ ဆံ့တဲ့ ကွာရန်တိန်း စင်တာတခုကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး အဲဒီဒေသမှာ လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို ရေ ရရှိကြစေဖို့ စီမံလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပြင် ပြည်သူတွေအနေနှင့် လက်ဆေးကြရာမှာ အခက်အခဲ တစုံတရာမရှိအောင် စီမံလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေး ဖြန်းပက်မှုတွေဟာ အဲဒီကျေးရွာနှင့် အနီးဝန်းကျင်တွေကို သန့်ရှင်းစင်ကျယ်မှု ရှိစေခဲ့ပါတယ်။
အလားတူ Kashmiri ဒေသ၊ Gaanderbal ခရိုင်၊ Chauntliwaar အရပ်မှ Zaitoona Begum ji ကလည်း ကပ်ရောဂါကာလကြီးအတွင်း သူမရဲ့ ကျေးရွာအနေနှင့် ဝင်ငွေရရှိစေဖို့ အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးမှုနှင့်အတူ ကပ်ရောဂါကို တိုက်ဖျက်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ရွာအနီးဝန်းကျင်မှာ အခမဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေနှင့် ရိက္ခာတွေ ပေးဝေခဲ့ပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှုနှင့် ဥယျာဉ်ခံစိုက်ပျိုးမှုတို့မှာ အဆင်မပြေကြသူတွေအတွက် ကောက်ပဲသီးနှံ မျိုးစေ့တွေနှင့် ပန်းသီပင်ပျိုတွေ ပေးကမ်းခဲ့ပါတယ်။ Kashmir ဒေသ၊ Anantnag ခရိုင်ရဲ့ စည်ပင်သာယာအဖွဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူ Shriman Mohd Iqbal အကြောင်းလည်း သာဓကပြု တင်ပြလိုပါတယ်။ သူနေတဲ့ ဒေသမှာ ဆေးဖြန်းဖို့အတွက် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းစက် လိုအပ်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစက်ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က ရူပီးငွေ ၆ သိန်းဖြစ်ပြီး အဲဒီစက်ကိုလည်း တခြားမြို့ကနေ သယ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူဟာ ဆေးဖြန်းစက်ကို သူကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီး ငွေ ၅ သောင်း အကုန်အကျခံ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလားတူပဲ နိုင်ငံတဝှမ်းမှာ အားတက်ဖွယ်၊ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ ဖေးမလုပ်ဆောင်မှု သာဓက အများအပြားတို့ ရှိကြပါတယ်။ အန္တရာယ် စိန်ခေါ်ချက်တွေကြုံတွေ့ရတိုင်း လူသားတွေဟာ ဇွဲလုံ့လတခုတည်းနှင့် ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုကစပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ မင်္ဂလာရှိလှတဲ့ Rakshabandhan ပွဲတော် အခါသမယကို ကျင်းပကြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပွဲတော်ကို မတူကွဲပြားတဲ့ပုံစံနှင့် ကျင်းပသွားကြဖို့ ပြည်သူတွေက စည်းရုံးလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ လူအများအပြားတို့ကလည်း ဒေသအလိုက် ပွဲတော်တွေနှင့် သဟဇာတရှိနေကြပါတယ်။ ဩဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့ဟာ နိုင်ငံတော် လက်ယက္ကန်းနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ လက်ယက္ကန်းနှင့် မိမိတို့ရဲ့ လက်မှုပညာတွေဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့ တင့်တယ်မှုသမိုင်းမှတ်တမ်းတရပ်ကို ထင်ဟပ် ခြုံငုံမိစေလျှက် ရှိပါတယ်။ ဒီကဏ္ဍ တိုးတက်ထွန်းကားဖို့နှင့် အိန္ဒိယ လက်ယက္ကန်းနှင့် လက်မှုပညာ ပြည့်ဝကောင်းမွန်မှုတွေကို ကမ္ဘာကြီးက ပိုမိုသိရှိလေလေ မိမိတို့ရဲ့ ဒေသန္တရ လက်မှုပညာရှင်တွေနှင့် ယက္ကန်းသမားတွေ ပိုပြီး အကျိုးရှိလေဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ လူငယ်လူရွယ်တွေဟာ ကျေးရွာတွေ၊ မြို့ငယ်လေးတွေနှင့် သာမန်မိသားစုဝင်တွေကနေ ပေါက်ဖွားလာကြတာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုအဆင့်ကလည်း တိုးများလျှက်ရှိပါတယ်။ အကျပ်အတည်းကာလမှာဖြစ်လင့်ကစား စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေနှင့်အတူ လှမ်းချီလာခဲ့ကြပါတယ်။ မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းတွေမှာ အလားတူ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီကနေ့ စိတ်နှလုံးမှပြောသော စကားများကဏ္ဍပိုင်းမှာ ထက်မြက်တဲ့ လူငယ်အချို့နှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဦးစွာအနေနှင့် Haryana ပြည်နယ်၊ Panipat မြို့မှ သမီးငယ် Kritika Nandal ကို ဆယ်သွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ အကောင်းဆုံး ရှေ့ဆောင် လမ်းပြပေးသူကတော့ သူမရဲ့ မိခင်ဖြစ်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ဘဝမှာ အခက်အခဲ အများအပြားတို့ကို ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရပေမယ့် ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဒါတွေကိုကြည့်ပြီး သူမကလည်း မိခင်လိုပဲ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်မှုတွေ ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီနောက် Kerala ပြည်နယ်၊ Ernakulam ခရိုင်မှ Vinayak နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင်….
Vinayak ဟာ ကြက်တောင်ရိုက်အားကစားကို ဝါသနာပါပြီး သူ့ရဲ့ အထက်တန်းပညာရေးအတွက် ဒေလီတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းတင်နိုင်ဖို့ လျှောက်လွှာတင်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် Uttar Pradesh ပြည်နယ်၊ Amroha ဒေသမှ Shriman Usman Saifi ကိုလည်း ဆက်သွယ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ Usman ဟာ သင်္ချာဘာသာရပ်ကို အထူးစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ပြီး သူဒီလို စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိစေဖို့ သူ့ဆရာတွေထဲတတဦးဖြစ်တဲ့ သင်္ချာဆရာ Rajat က အစမှသည် အဆုံးထိ သွန်သင်ပဲ့ပြင်ခဲ့တာကြောင့် သူနှစ်သက် ဝါသနာပါတဲ့ ဘာသာရပ်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီးသူဟာ ကုန်စည်နှင့် စည်းကျပ်ခွန် ဥပဒေအပါအဝင် ငွေကြေးတန်ဖိုး ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့လို ခေတ်ပြိုင်အကြောင်းအရာတွေအပေါ် စာပေရေးသားရတာကို ဝါသနာပါကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် Tamilnadu ပြည်နယ်မှ သမီးငယ် Kaniga နှင့် စကားစမြည် ပြောခဲ့ရပါတယ်။ သူမရဲ့ ဖခင်ဟာ ကားဆရာတယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့အမတယောက်က MBBS ဆေးပညာ လေ့လာသင်ယူနေကာ သူမကလည်း ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ မျှော်မှန်းထားသလို သင်္ချာ ဘာသာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျာ…. မတူကွဲပြားတဲ့ အခြေအနေအသီးသီးတို့မှာ အောင်မြင်မှုတွေနှင့် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြနေတဲ့ သူရသတ္တိရှင် လူငယ်မိတ်ဆွေလေးတွေရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းတွေအများအပြား ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီလို လူငယ်တွေနှင့် အတတ်နိုင်ဆုံး ဆွေးနွေးပြောဆိုလိုပေမယ့် အချိန်အခက်အခဲကြောင့် များများ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော်ကို လှုံ့ဆော်မှုပေးနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေအားလုံး မျှဝေဖော်ပြပေးကြဖို့ ငယ်ရွယ်သူမိတ်ဆွေတွေကို တိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေ မိုင် ထောင်ပေါင်းများစွာအကွာ၊ ပင်လယ် ၇ ခု ကျော်သွားမယ်ဆိုရင် “ဆူရာနမ်” ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံငယ်လေးတခု ရှိပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ အဲဒီနိုင်ငံငယ်လေးနှင့် အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ ချစ်ကြည်မှု ရှိထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရာချီအကြာက အိန္ဒိယဒေသမှပြည်သူတွေဟာ အဲဒီဒေသကိုသွားရောက်ပြီး နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကနေ့ကာလမှာဆိုရင်တော့ စတုတ္ထ သို့မဟုတ် ပဥ္စမမြောက် မျိုးဆက်တွေ အဲဒီမှာ ရှိနေကြပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဆူရာနမ်နိုင်ငံမှာ လူဦးရေ ၄ ပုံ ၁ ပုံ ကျော်တို့ဟာ အိန္ဒိယအနွယ်ဝင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘုံဘာသာစကားတွေအနက် တမျိုးဖြစ်တဲ့ ‘Sarnami’ ဘာသာစကားကို သိကြပါသလား။ Bhojpuri ဆိုတဲ့ ဒေသိယစကားတမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ အိန္ဒိယအနွယ်ဝင်တွေဟာ ဒီလို ယဉ်ကျေးမှုဆက်ဆံရေးမျိုးကို အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ခံစားမိကြပါတယ်။
မကြာသေးမီက Shri Chandrika Parasad Santokhi ဟာ ဆူရာနမ်နိုင်ငံရဲ့ သမ္မတအသစ် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ မိတ်ဆွေ ၁ ဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယ အနွယ်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါလီမန်ရေးရာ ညီလာခံမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကျမ်းသစ္စာ ကျိမ်ဆုမှုကို သက္ကတ ဘာသာစကားနှင့် ရွတ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူက….
အို…. မီးလျံအရှင် နေနတ်သားမင်းကြီး
ကျွန်ုပ် ကျမ်းသစ္စာ ပြုလိုပါသည်။ စွမ်းအင်နှင့် ခွန်အား ပေးသနားတော်မူပါ။ လွဲမှားမှုမှ ကင်းဝေးပြီး သမ္မာတရားမှာရှိစေဖို့ အခွင့်ပြုပါ… လို့ သစ္စာတိုင်တည်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်အနေနှင့် Shri Chandrika Prasad Santokhi ကို ချီးမြှောက်လိုက်ပြီး သန်းပေါင်း ၁၃၀၀ ကျော်ရှိသော အိန္ဒိယ ပြည်သူထုတို့ကိုယ်စား အကောင်းဆုံး ဆုတောင်းပတ္တနာ ပြုလိုက်ပါတယ်။
ယခုအချိန်ဟာ မိုးရာသီကာလလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာလည်း ဒီကာလမှာ အညစ်အကြေးတွေကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအလားအလာ တိုးများလျှက်ရှိတယ်လို့ ပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာ လူနာတွေ စုပြုံရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရေးကို အာရုံပြုဖို့နှင့် Kadha လို ခုခံအား တိုးတက်ကောင်းမွန်စေတဲ့ တိုင်းရင်းဆေးတွေ မီဝဲကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ကိုရိုနာရောဂါ ကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကာလအတွင်း မိမိကိုယ်ကိုယ် တခြားရောဂါတွေကနေ ကာကွယ်ထားဖို့က အလွန် အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကို မကြာခဏ သွားရောက်ရမှုမရှိစေဖို့အတွက် မိမိတို့ဘက်က အပြည့်အဝ ဂရုစိုက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို မိုးတွင်းကာလအတွင်းမှာတော့ နိုင်ငံရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အများအပြားတို့ဟာ ရေလွှမ်းမိုးမှု အခြေအနေအောက် ကျရောက်လျှက်ရှိနေကြပါတယ်။ ဘီဟာရ်နှင့် အာသံပြည်နယ်တို့လို ပြည်နယ်အများအပြားတို့ဟာ ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးတို့ကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေကြရပါတယ်။ အခြားတဖက်မှာလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် အန္တရာယ်က ရှိနေပြန်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာ အစိုးရတွေ၊ NDRF ကပ်ဘေးဆိုင်ရာ တပ်ဖွဲ့တွေနှင့် အခြားသော တုံ့ပြန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအပြင် ပရဟိတ ကူညီရေး အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ အတတ်နိုင်ဆုံး သက်သာလျော့ပါးရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံးဟာ ကပ်ဘေးသင့်တဲ့ ဒေသတွေနှင့်အတူ ရပ်တည်လျှက် ရှိနေကြပါတယ်။
မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ…. လာမယ့် စိတ်နှလုံးမှပြောသော စကားများ ဆွေးနွေးချက်မတိုင်မီ ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာလည်း မိမိတို့ရဲ့ ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ ကျင်းပမှုတွေဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု အခြေအနေ အမျိုးမျိုးတို့အောက်မှာ ပြုလုပ်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဒီ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခါသမယမှာ နိုင်ငံအတွင်းမှ ပြည်သူလူထုတွေ ကပ်ရောဂါဘေးကနေ ကင်းလွတ်နိုင်ကြပါစေ။
နောက်တကြိမ် ကျနော်တို့ တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါ အသစ်အသစ်သော အကြောင်းအရာတွေ ပေါ်ပေါက်ပြီး သင်ခန်းစာတခုခု လေ့လာသင်ယူသွားကြမည်ဖြစ်ကာ အားလုံးနှင့် မျှဝေဖော်ပြခွင့် ရကြဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့ကိုယ်တိုင်နှင့် သင့်မိသားစုတို့ကို ဂရုစိုက်ကြဖို့နှင့် ကျန်းကျန်းမာမာရှိနေကြဖို့ အားလုံးကို ဖော်ပြလိုပါတယ်။ လာမယ့် ပွဲတော်တွေနှင့် ပတ်သက်ပြီးလည်း နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ကို ဆန္ဒမွန် ပြုလိုက်ပါတယ်။